Somali News 10.07.21 | KWIT
By Halima Osman • Oct 8, 2021
Garsoore ayaa diiday codsi 17 jir ah oo ahaa in lagu maxkamadeeyo sidii dhallinta ku dhimatay toogasho ka dhacday badhtamaha magaalada Sioux City gugii. Dhageysiga dacwadda ayaa la qaban doonaa 2 -da bisha November.
Dwight Evans oo ah toddoba iyo toban jir ayaa maxkamad la soo taagi doonaa isagoo qaangaar ah iyadoo lagu eedeynayo dil darajada koowaad ah, isagoo hubaysan oo ujeeddo leh iyo laba tirooyin oo daroogo ah, ayuu qoray wargayska Sioux City Journal.
Evans ayaa qirtay dambiga lagu soo oogay horaantii sanadkan. Garsooraha degmada Jeffrey Poulson ayaa xukunkiisa Talaadadii ku sheegay in diiwaanka denbiyeedka ballaaran ee Evans uu muujinayo in maxkamadda dhallaanka ay ku guuldareysatay inay dhaqan celiso.
Warbixinta Waaxda Caafimaadka ee South Dakota ee COVID-19 maanta waxaa ku jiray saddex dhimasho oo dheeri ah iyo 474 caabuq oo cusub. Caabuqyada cusub waxaa ka mid ahaa 87 degmo oo ka tirsan Minnehahahaha iyo 24 oo ka tirsan Degmada Lincoln. Infekshannada firfircoon ayaa dhacay.
Dadka reer Iow ee dakhligooda ku waayey COVID-19 waxay bilaabi karaan inay soo diraan codsiyadooda gargaarka biilka biyaha laga bilaabo berri. Barnaamijka cusub ee Kaalmada Qoyska ee Dakhliga-yar ee dawladda dhexe ayaa qayb ka ah dadaallada socda ee lagu caawinayo qoysaska uu saameeyey masiibada. Gobolku wuxuu haystaa wax ka yar toban milyan oo doollar si loogu qaybiyo qoysaska u qalma.
By Halima Osman • Oct 6, 2021